Git Sangit News » ताली बजाउँदा विभिन्न स्वास्थ्य-लाभ मिल्छ ? जानिराखौ,
ताली बजाउँदा विभिन्न स्वास्थ्य-लाभ मिल्छ ? जानिराखौ,
हामी सबैको बानी नै हो, धुमधामसँग गीत गाइरहेको ठाउँमा हामी गीतको भाकासँग मिल्नेगरी ताली बजाउँछौं । कोही नाच्दैछन् भने हामी त्यसमा रौनक थप्न ताली बजाउँछौं । हामिलाई ताली सामान्य लाग्छ तर यो निकै अर्थपूर्ण शारीरिक क्रिया हो । ताली किन बजाइन्छ ? यसबारे हामी अनबिग्य छैनौं ।
ताली बजाउनुको अर्थ केलाउन नसकेपनि यसबाट प्रकट हुने भावलाई हामीले अनुभूत गरेका छौं । ताली बजाइरहँदा पैदा हुने उमंगलाई पनि हामीले अनुभूत गरेका छौं । ताली बजाउनुको सम्बन्ध भावनात्मक उत्साह, उमंग र खुसीसँग मात्र छैन । यसले स्वास्थ्यमा पनि फाइदा गर्छ । किनभने हाम्रा दुबै हत्केला जब आपसमा घर्षण हुन्छन्, त्यसले शारीरिक रुपमा पनि केही लाभ मिल्छ ।
भजन किर्तनमा ताली बजाउनु हाम्रो धार्मिक संस्कार हो । जब हामी कुनै मन्दिरमा पुग्छौं वा हाम्रो घरमा पूजाआजा गर्छौं, तब भजन किर्तनमा हामी ताली बजाउँछौं । आखिर भजन किर्तनमा किन ताली बजाइन्छ ? यसको अर्थ वा महत्व के होला ? भजन किर्तनमा ताली बजाउनुको धार्मिक आस्थाको कुरा मात्र होइन, वैज्ञानिक महत्वको कुरा पनि हो ।
हाम्रो देशमा प्राचिनकालदेखि नै मठमन्दिर स्थापना गर्ने, देवी देउराली स्थापना गर्ने, भजन किर्तन गर्ने परम्परा चलिआएको छ । भजन किर्तनमा ताली बजाउँनुलाई शुभ सूचक मानिन्छ । ताली बजाइरहँदा हाम्रो मनको चिन्ता, तनाव, कुष्ठा हट्छ । हामीमा उमंग भाव पैदा हुन्छ । मन खुसी र उत्साहित हुन्छ । मन सकारात्मक हुन्छ ।
हताली बजाउनु एक सहज योग पनि हो । यदि हामी नियमित रुपले ताली बजाउँछौ भने हामीलाई हठयोगको आवश्यक नपर्ने बताइन्छ । हाम्रो हातमा एक्युप्रेशर प्वाइन्ट अत्याधिक हुन्छ । एक्युप्रेसर पद्धतीमा यिनै हत्केलामा दबाइएर कतिपय उपचार गरिन्छ । यस्ता उपचार निकै प्रभावकारी हुने र साइडइफेक्ट पनि नहुने बताइन्छ । एक्युप्रेशर उपचार विधी सदियौंदेखि प्रचलित एक प्रभावकारी उपचार विधी हो ।
जब हामी ताली बजाउँछौं, हत्केलाको एक्युप्रेशर प्वाइन्टमा राम्रो दबाव पर्छ । यसले हृदयरोग, फोक्सोको रोग जस्ता अन्य थुप्रै रोगबाट मुक्त गराउँछ । ताली बजाउनु एक किसिमको व्यायाम ने हो । यसले रक्तसंचारमा हुने अवरोधलाई हटाउँछ र रगत शुद्धिकरण गर्छ । स्वास्थ्य र निरोगीका लागि ताली बजाउनु एकदमै फाइदाजनक काम हो । यसले मानसिक शान्ति, उर्जा मिल्छ । साथसाथै स्वास्थ्य लाभ पनि ।
प्रकाशित मिति १५ माघ २०७६, बुधबार ०९:३३